John Terry oo magacaabay kooxaha u sharaxan hanashada koobka Champions League xilli ciyaareedkan – Gool FM
(Yurub) 14 Dis 2021. Halyeeyga kubadda cagta England iyo kooxda Chelsea ee John Terry ayaa aaminsan in saddexda kooxood ee horyaalka Premier League ay yihiin kuwa ugu cadcad ku guuleysiga koobka Champions League.
Haddalka Halyeeyga kubadda cagta England iyo kooxda Chelsea ee John Terry ayaa wuxuu imaanaya kaddib markii shalay oo Isniin ah la sameeyay Isku aadka wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Kooxaha Manchester City, Liverpool iyo Chelsea ayaa qaybta hore ee horyaalka Premier League bandhig fiican ka sameeyay kulammadii ay ciyaareen, waxaana kabtankii hore ee Blues uu sheegay in saddexda kooxood ay u sharaxan yihiin inay ciyaaraan finalka Champions League ee la ciyaari doono bisha May ee soo socota.
John Terry ayaa sidoo kale Bayern Munich ku daray liiska tartamayaasha, isagoo ka war qaba in Chelsea ay finalka tartankan ku garaacday kooxda reer Germany sanadkii 2012, markaasoo Terry uu ahaa kabtanka Blues, balse ma uusan ciyaarin finalka tartankan sababo la xiriira ganaax.
Haddaba halyeeyga kubadda cagta England iyo kooxda Chelsea ee John Terry ayaa u sheegay BT Sport:
“Yaa ku guuleysan doona Champions League sanadkan? Chelsea, Bayern Munich, Liverpool iyo Manchester City ayaa xaallad wanaagsan ku jira maanta sida ay ila tahay aniga.”
Marka la eego isku aadka wareega 16-ka Champions League ee la sameeyay shalay oo Isniin ah, Chelsea waxay wajihi doontaa Lille, halka Liverpool ay ku aaday Inter Milan, Manchester City waxay la ciyaari doontaa Sporting Lisbon, iyada oo sidoo kale Bayern Munich ay wareegan ku wajihi doonto kooxda Salzburg.